ပြည်ကြီးငါးကြော် ရွရွလေး | Wutyee Food House
« နှစ်သစ်အမှတ်တရ ဟင်းရွက်စုံခေါက်ဆွဲကြော်
ထိုင်းစတိုင် ၀က်သားကင် ထမင်းကြော် »
January 10, 2011 by chowutyee
ဒီပြည်ကြီးငါးကြော်လေးရဲ့ ထူးခြားမူက အညီနံ့ကင်းပြီ စားလို့လည်း အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။ ၀တ်ရည်ကတော့ ကြိုက်လွန်းလို့ နှစ်ခါတောင် လုပ်စားဖြစ်တယ်။ သူက ငရုတ်ကောင်းမှုန့်များများ ထည့်ထားတာမို့ အညီနံ့ကင်းပြီ အရသာကလည်း ဂွတ်ရှယ်ပါပဲ။ ချက်ရတာလည်း အရမ်းလွယ်ပြီ သူနှင့်လိုက်ဖက်မယ့် ဆော့လုပ်နည်းလေးပါ တွဲရေးပေးထားတာမို့ အိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်ရအောင်….
၁။ ပြည်ကြီးငါး – ၃၀ကျပ်သား
၂။ ဂျုံမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ရဇွန်း
၃။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၄။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ငရုတ်သီးအချိုဆော့ (sweet chilli sauce) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း
၂။ ငါးငံပြာရည် (fish sauce) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၃။ သံပရာသီး – တ၀က်
၄။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၂ခု (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
၁။ ပြည်ကြီးငါးများကို အညီအချွဲများဖြဲပြီ သေချာ သန့်စင်ထားပါ။
၂။ ပြီးမှ ပြည်ကြီးငါးကို ကြက်ခြေခတ်ပုံ ဓားဖြင့်မွှန်းပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် (ဂျုံ၊ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်)တို့ကို ဇလုံတစ်ခုထဲတွင် ရောမွှေလိုက်ပါ။
၄။ ပြီမှ ထိုဇလုံထဲသို့ ပြည်ကြီးငါးများ ထည့်ပြီ ဂျုံကပ်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ (ဂျုံ၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ပြည်ကြီးငါးများကို ပလပ်စတစ် အိတ်တစ်ခုထဲထည့်ပြီ အိတ်ကိုပတ်ကာ လှုပ်ခါပေးက ပိုကောင်းပါသည်)
၅။ ပြီးလျှင် ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်၍ ဆီပူလာလျှင် ပြည်ကြီးငါးများကို အညှိရောင်သန်းသည်အထိ ကြော်ပေးပါ။
၆။ ထို့နည်းအတိုင်း ကျန်ပြည်ကြီးငါးများကို ဆက်လက်ကြော်ပေးပါ။
ရ။ ပြည်ကြီးငါးနှင့် တွဲစားရန် ဆော့အတွက် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ (ငရုတ်သီးချိုဆော့၊ ငါးငံပြာရည်၊ သံပရာရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ) တို့ကို အားလုံးကို ခွက်တစ်ခုထဲတွင် ရောမွှေလိုက်ပါ။
၈။ ပြည်ကြီးငါး ကြွ့ပ်ရွရွကြော်လေးကို ဆော့ဖြင့်တွဲဖက်ကာ စားသုံးနိုင်ပါပြီ….
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 16 Comments
on January 10, 2011 at 9:55 am | Reply hmone
look yummy but some images are not showing so upload again own
on January 11, 2011 at 2:16 am | Reply chowutyee
ငါဆီက မြင်ရတယ် မှုံကြီးရဲ့… စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်၊ ကိုကြီးတောင် လုပ်ကျွေးလိုက်သေးတယ်
on January 10, 2011 at 1:38 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
မချောအတွက် များများကြော်ပေးလိုက်ပြီနော်… စားသွားပါအုန်း.. 😀
on January 12, 2011 at 9:13 am | Reply သိင်္ဂါကျော်
on January 19, 2011 at 6:44 am | Reply chowutyee
on January 22, 2011 at 12:49 am | Reply chit2
thank u,Wutyee! u r so talented! thank for sharing wiv us!x
on February 5, 2011 at 9:43 am | Reply chowutyee
on January 29, 2011 at 5:04 pm | Reply lyk
အမလေး .. ဒီဆိုက်ကို ဒီနေ့မှ ပြန်ဝင်လို့ရတယ်
ဒီပြည်ကြီးငါးကတော့ နဂိုကတည်းက အကြိုက်ပဲ
Thanks! plz try it
on August 2, 2011 at 12:08 pm | Reply ဇော်ခင်
ပါပလာ ကြော် အတွက် ပါပလာအပြား လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါဗျာ။
on November 1, 2011 at 4:36 am | Reply ကိုမြတ်
on February 16, 2012 at 1:50 pm | Reply chowutyee
ကိုမြတ် ပြည်ကြီးငါးမှာ ရေရှိနေလို့ ကြော်တဲ့အခါ ထပေါက်တာပါ။ (သို့မဟုတ်ရင်) ဒယ်အိုးမှာ ဆီမထည့်ခင် ရေကျန်နေလို့ပါ။ ဒီ ပြည်ကြီးငါးကြော်က ဂျုံနဲ့ ကပ်ကြော်တာမို့ ဆီမပေါက်ပါဘူး။ ဆီပေါက်မှာ စိုးရင် မီးနည်းနည်းနဲ့ ကြော်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ.. ကျေးဇူးပါ..
on February 16, 2012 at 8:52 am | Reply aye thida
on February 16, 2012 at 1:54 pm | Reply chowutyee
လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 🙂 it is really delicious one
on May 14, 2012 at 2:01 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] January 10, 2011 ပြည်ကြီးငါးကြော် ရွရွလေး […]